www.nepalqataronline.com Thursday, 23rd May 2013
Literature दुई शव्द्ध कवि कटुवालको सम्झनामाPosted on: 2010-03-09 09:25:07 [ दुई शव्द्ध कवि कटुवालको सम्झनामा ] जब म हरिभक्त कटुवालको बारेमा सोच्न थाल्छु , भन्छु एउटा उदास अनुहार, केहि खोजेजस्ता आँखा मैलो कोट र पुरानो चप्पल लगाएको एक अधवैँशे मान्छे मुखमा चुरोट च्यापेर म तर्फ आईरहेको अनुभव गर्छु । त्यो गतिशील आकृति जतिजति नजिकिन्छ, म ठम्याउँदै जान्छु हरिभक्त कटुवाल भनेको यही हो । सडक कविता क्रान्तिको सहकर्मी कटुवालकविताबाट क्रान्ति आव्हान गर्ने कटृवाल कवितालाई महलबाट सडकमा ओराल्ने कटुवाल म अड्कल गर्छु , उ भर्खरै कुनै भट्टीबाट निस्केको छ । अँ , भट्टी । भट्टी वा रक्सी पसल चाहारेर हिँड्ने यो मान्छे साहित्यको एक शशक्त कवि हो । हरिभक्त जसलाई हामीले प्रवासबाट ल्यायौँ । यो देशमा टेकेपछि उसले आफ्नो �प्रवासी� उपनाम छाड्यो किनकि उ स्वदेश भित्री सकेको थियो । ( त्यसो त महान् कवि कलाकार मानव मात्रका साझा सम्पदा हुन्, जसलाई हामी राजनीतिक भूगोलको परिधि भित्र खोज्छौँ, थाहा छैन यो राष्ट्रवाद हो वा के हो ? ) जो यो देशको माटो प्रतिको मायाले खिचिएर आयो । आयो राम्रै भयो । कवि आयो के छ र । एक पेट खान्छ , कविता लेख्छ । मनलागे पढदिए भयो , सुनिदिए भयो । रेशम कीरा जस्तै हो कवि , पाल्न पर्छ , फाईदै हुन्छ । कटुवाल जागीरे भयो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा वा भनौँ कविता कारखानामा । विद्धान साहित्यकारले जागीर खाने ठाउँ । कवि कटुवाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशाल भवनमा पस्यो, वस्न पायो, हुन सक्छ खुशीले रमायो । त्यही खुशियालीमा दुई चार प्याग लगायो । तर बिचरा हरिभक्तलाई के थाहा, जीवन फलाउन फुलाउन चाकडी गर्नु पर्छ भनेर । चाकडी नै सफलताको सिंढी हो । चाकडी पनि कला हो । कविता लेखेर के पाईन्छ , चाकडी गरे सबै थोक पाईन्छ । उसले जानेन । पूर्खा स्वाभिमानी थिए भन्दैमा उसका सन्तान पनि स्वाभिमानी नै हुन्छन् भनी ठोकुवा गर्न सकिन्न । हरिभक्तले �जी� �हजुर� �आज्ञाहोस्� जस्ता गुनिला शव्द्धहरुको अभिप्राय बुझेन । हुन सक्छ , उसले बुझ पचायो । जे होस् उ व्यवहारिक भाषा विज्ञानमा कमजोर मात्र हैन निकम्मा ठहरियो । त्यसैले म फेरि दोहोर्याएर भन्छु फगत् त्यसैले टिप्पणी सदर भयो , हरिभक्त बदर भयो, हरिभक्त ढाक्रे भयो । उः मीठा मीठा गीत र कविता रक्सी संग साट्न थाल्यो । कविता बेच्यो, रक्सी किन्यो । (अँ, कविता र मदिरा दुवै तरलता ) उसले आफुले पियो अनि साथीभाईलाई पियायो । उ कविताको खोजीमा सडक गल्ली गल्ली धरमराउँदै हिँड्न थाल्यो । उसले थाहा पाएन , यो देशमा कविता महलका एअर कण्डिसन कोठामा बस्छिन् , तारे होटेलमा विमोचित हुन्छिन् अनि संकेत मात्र दिनुपर्छ , समीक्षकहरु लेखिएका मात्र होइन लेख्न बाँकी कृतिको समेत समीक्षा गरिदिन्छन् । अँ देश नै अचम्मको , जहाँ लेखक मुश्किलले २, ४ जना मात्र जन्मन्छन् र समीक्षक चाहिँ असिना परे जस्तै । अनि जहाँ मौलिक ग्रन्थकार भन्दा समीक्षकको भाउ चर्को छ । मानौँ लेख्न त के छ जे लेखे पनि भयो, समीक्षा गर्न पो गाह्रो भनेझैँ । हेर्नोस् , ऊ त्यो परवाट ढलपल गर्दै आउने हरिभक्त कटुवाल हो । सायद आज धोवीखोलाको डेरा जान विर्सेछ , यतै कतै रात विताउने सुरमा छ , के छ र जीन्दगी ! के छैन र उसको ? आसाममा एउटी बुढी आमा, छोराछोरी र उसको प्रतिक्षामा बसेको एउटी भाग्यवती नारी छ जसको लोग्ने कविता उत्पादन गर्ने कारखाना भैदिएको छ । उसले पिएकै छ , मीठा मीठा गीत लेखेकै छ । हभिक्त र नारायण गोपाल एउटा पिउँछ र गीत लेख्छ , अर्को पिउँछ र गीत गाउँछ । �पोखिएर घामको झुल्का भरी सँघारमा�हरिभक्त कटुवाल मीठो मीठो गीत लेख्छ , हरिभक्त कटुवाल खुव रक्सी खान्छ । सवैले थाहा पाए हरिभक्त कटुवाल ड्रङकार्ड हो , जड्याँहा हो , तर थोरैले थाहा पाए उ एक प्रतिभाशाली कवि पनि हो , स्वाभिमानी, राष्ट्रप्रेमी हो । नेपाल आगमनको करिव एक दशाव्दीमा उ पुरानो हुन्छ , जर्जर र जीर्ण हुन्छ वा भनौँ सर्भिसीङ्ग मात्र होईन रिपेअरिङ्ग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यो नवीनताको युगमा कसले गरोस् बुढो पुरानोको मरमत ? उ थोत्रिन्छ । प्रयोजनहीन हुन्छ । अनि ऊ उछिट्टिएको आगोको फिलिङ्गो झैँ तीन शहरलाई अन्तिम विदाई दिँदै आसाम पुगेर सेलाउँछ । एउटा ज्योति जहाँ बल्यो त्यहिँ पुगेर निभ्छ । �मन त फलामकै भए हुन्थ्यो� भन्ने कविकै अनुशरण गरी भन्न मन लाग्छ शरीर त फलामकै भए हुन्थ्यो । हरिभक्त कटुवाल मर्यो , खबर छापिन्छ, साहित्यिक मित्रहरु बीच चर्चा हुन्छ । तर मलाई विश्वाश लाग्दैन । हरिभक्त मर्ने खालको मान्छे होइन । हरिभक्त मरेको छैन । यदि उ साँच्चै मरेको हो भने ( मरेर उ अमर भएको छ , कारण उसको जीवनमा अब मृत्यु दोहोरिने छैन । ) बत्तिहरु निभाऔँ र हामी सबै डाँको छोडेर रोऔँ , कहिँ आवाज सुनेर फर्केर आउँछकि ? एउटा मीठो गीत लेखी पठाउँछ कि ? ( लेखक सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस रत्ननगर चितवनका पूर्व क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ । )Other Articles को आदिवासी, को अनादिवासी ? रामशरण घिमिरे